Sidda Loo Sameeyo Shaah Soomaaliyeed |
Ciqaab Wadareed Laga Dan Leeyahay! -Muqdisho
Bashir Maxamed, March 1, 2019
“NAO” Caawiyaha Musaafiriinta ITukesomalism.com
Maxaa Keena Faruuryo Dildilaaca |TukeSomalism.Com
Waa Sidee Muuqaalkii Soomaalida Yemen?
Tuke Somalism — August 23, 2015
Assalaamu Calaykum! kusoo dhawaada barnaamijkii cunta karinta. Maanta waxaan barani doonaa sidda ama qaabka loo kariyo shaaha. Sidda aan wada ogsoonahay marwalbo waxaa wanaagsan inaad ku noolaato jawi nadaafadiisa ay wanaagsantahay, qaasatan weelasha ama allaabta aad wax ku cunayso mise aad wax ku karsanayso. Shaqsiyaadka caalamka wax yaabaha ay u kalla duwanyihiin waxaa ka mid ah xagga nadaafadda, hadaba aan ku dadaalno siddii aan ugu noolaani laheen jawi nadaafad leh. Qodobadaan hoos ku qoran waxay kuu tilmaamayaan sidda loo sameysto shaah fiican oo soo jiidasho wanaagsan leh. Hadaba waligaa shaah ma sameysatay? Sidduu ahaa qaabka aad u sameysatay?
Marka horre waxaad soo qabsanaysaa kirliga ama jalmada shaaha lagu karsado sidda aad u wada taqanaan.
Dabka ayaad shidaneysaa. Waxaa macquul ah inaad qoryo mise dhuxul wax ku karsanayso, haddii aad wax ku karsanayso qoryo mise dhuxul umma baahnid inaad qiyaasto heerarka kalla duwan (degree) ee waxaad u baahantahay inaad si toos ah u shido dabka. Haddii aad tahay shaqsi isticmaalo sidda korantada waxaad u baahantahay inaad qiyaasta aad doonayso inaad wax ku kariso qiyaasato. Marwalbana la soco heerka makiinada mise korontada aad isticmaalayso. Wax walbo ayaa dhici karo qaasatan korantada in la iska illaaliyo ayaa wanaagsan, nafta bini’aadamka waa qaali marwalbo. Waxaa macquul ah inaad wax ku karinayso makiinada wax lagu kariyo sidda gaaska, marwalbo adiga ayay kugu xerantahay waxaad wax ku karsanayso.
Intaas kadib, kirliga ama jalmada ayaad dabka saaraneysaa, dabka hadduu fiicanyahay dhaqso ayuu karayaa hadduu fiicneyna wuu kaa daahayaa, marka dabka iska nooleya intuu dabka kuu saaranyahay heylka iyo qorfaha iyo dhagayaraha ayaad isku tumaysaa.
Heylka 5 xabo inuu ka bato ma fiicno dhagayarahana qaado haafkeeda, kadib jabyar oo sanjabiil ah ayaad tarmuushka ku rideysaa.
Shaaha waxaad ku dhex shubaysaa mise aad ku dhex rideysaa caleenta shaaha, salka ayaad u dhigeysaa.
Sanjabiisha shaaha kadib markuu kuu karo hadduu labo darmuus yahay oo aad rabto inaad badsato shaaha waxaad ku daraysaa 1 bakeeri oo sonkor ah, hadduu yahay hal darmuus iyo bar waxaad ku daraysaa 1 bakeeri haafkiisa si aysan sonkorta ugu badanin laakiin haylka, qorfaha iyo dhagayaraha sonkorta markaad ku darto kadib ayaad ku daraysaa.
Kadib hal mar camal markuu soo koco waxaad ku dari caleenta.
Caleenta wax badan ha ku darin haddii kalle wuu kaa madoobaanayaa, labo jeer bas ha is rogeen biyaha shaaha.
Markaad sonkorta, caleenta aad ku darto waxaad ku daraysaa qorfaha, sanjabiilka iyo dhagayaraha.
Intaas kadib wax ka yar 2 daqiiqo markii ay u dhamaato waad ka soo dejisanaysaa oo falaaska ayaad ku shubanaysaa. Haddii aad jeceshahay inaad cadeys ka dhigato waxaad ku darsanaysaa caanaha sidda caadiga ahayd waxaad caanaha ku darsanaysaa markaad kasoo dejiso kadib.
Hadda waxaad karsatay shaah macaan, marwalbo sonkorta waa la iska yareeyaa sidaas ulla soco. Shaahaas wuxuu sugayaa hadda qofkii cabi lahaa. Qofkii nidaamkaas u karsado wuxuu dareemayaa maalintaas inuu shaah fiican cabay, wuu usoo xiisi doonaa qofkii lagu marti qaado shaaha noocaas oo kalle, sawabtoo ah Soomaalida waa dad shaaha jecel.
Next post Maxaa Ka Dhaxeeya Hanweynida Iyo Hormarka?
Previous post Falanqaynta TDFH (SWOT Analysis) |Tukesomalism.com